« M’Koloproject »: homen-danja ny famoronana… | NewsMada
« M’Koloproject »: homen-danja ny famoronana…
Mitohy hatrany ny fanatanterahan’ny ADMC-Craam ireo hetsika samihafa ao anatin’ny fandaharanasany, « M’KoloSaina 2.0 ». Anisan’izany, ny « M’Koloproject », izay nampahafantarina tamim-pomba ofisialy, tamin’iny herinandro lasa iny. Tanjon’ny « M’KoloSaina 2.0 » ny hampiroborobo sy hahamatihanina ireo sehatrasa mahakasika ny zavakanto sy ny kolontsaina. Tsy mivoana amin’izany ity tetikasa iray ity.
Fifaninanana entina manaitaitra ny fahaiza-mamorona sy mitantana sehatra iray mahakasika ny zavakanto sy ny kolontsaina ny « M’Koloproject ». Ny tanora no tena kendrena handray anjara amin’ny famoronana io tetikasa io, izay tokony ho azo tanterahina tsara. Takina ny tetikasa ahitana hevi-baovao fa tsy maka tahaka ny efa ataon’ny hafa ary koa tetikasa mifanaraka tsara amin’ny zava-misy eo amin’ny fiarahamonina sy ny toekarena malagasy.
Manana iray volana ny mpandray anjara handefasana ny taratasy rehetra ilay, toy ny fampahafantarana voafintina na mazava ny mahakasika ilay tetikasa. Misokatra ho an’ny tanora 30 taona no midina ny fifaninanana, saingy mila fahazoan-dalana avy amin’ny ray aman-dreny ho an’ireo latsaky ny 18 taona.
Tanjon’ny mpikarakara ny « M’Koloproject » ny hampirisika ny mpianatra amin’ny fandraharahana sy ny famoronana asa fidiram-bola ary asa ho an’ny hafa. Hojerena, mandritra io fifaninanana io, ireo hita fa hitoeran’ny hoavin’ny fandraharahana, indrindra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina. Hivoaka ny 17 janoary 2019 ny valin’ny sivana voalohany amin’ny fifaninanana. Hampahafantarina ny 23 janoary kosa ireo mpifaninana mendrika indrindra.